Global Voices teny Malagasy » Manohana Ara-bola Ny Mozika Rock Tsy Tia Tanindrazana Ny Governemanta Ao Makedoniana Ka Tsy Faly Ny Vahoaka. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jona 2016 11:47 GMT 1	 · Mpanoratra Marko Angelov Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika, Vaovao Mafana, Zavakanto & Kolontsaina
Pikantsary avy amin'ny lahatsary Amanet vatsian'ny hetram-bahoaka, avy amin'i Simeon Ivanov-Kango, ahitàna ny isan'ireo tia sy tsy tia tamin'ny volana 12 May 2015.
Romotra ireo olom-pirenena Makedoniana raha nahalala fa mamatsy sy mamoaka mozika rock avy amin'ny alalan'ny hetram-bahoaka ny governemantany. Namatsian'ny governemanta ny famokarana ireo karazana mozika pop isan-karazany tao an-toerana ny vola mitentina 200.000 euros isan-taona ( $228,000 eo ho eo), nanolotra euros an'aliny maro tamin'ny fotoana iray ho anà mpanakanto samihafa mba hamokarana hira sy mozika anaty lahatsary.
Tafiditra ao anatin'ilay fantina ireo sokajy toy ny ‘famoronana izay manamafy ny tantaran'i Makedonia” sy “ireo famoronana izay manamafy ny soatoavin'ny fianakaviana ary ireo fianakaviana maro anaka”, ilay fantina mozika.
Ankoatra ny fitakiana ny mozika mba hifanentana amin'izay nofaritan'ireo tsikera ho toy ny fotokevitry ny elatra ankavanana, heverina ho sahala amin'ny “kintana” tsy handiso fanantenana ireo nahazo ny fanampian'ny governemanta, izay mitahy “fanaporofoana” io sata io amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny komitim-panjakana, mikasika ny isan'ireo rakikira navoakany, ireo lanonana nokarakarain'izy ireo, sy ny sisa. Ambany fitantanan'ny Public Broadcasting Service MRTV  ilay fifaninanana, mandalo aminà kaomisiona iray manokana.
Tsy nahatam-bava ilay mpikambana fahiny tao amin'ilay kaomisiona, Kosta Karev, nanoratra bilaogy  fa raha ny marina dia tsy notakiana hanome porofo momba ireo fitakiana ireo ny mpifaninana. Nanoratra ihany koa izy hoe:
Tena sahirantsaina aho noho ireo fifanarahana nantao tsy amin'ahiahy rehetra ireo, kajy natao hambotriana ny hafa, ary ireo fifandraisana eo amin'ny samy olona izay miantraika amin'ireo endrika rehetra ao anaty fiarahamonintsika, ary koa ny asan'ilay fikambanana. Eny, afaka manameloka ny toe-tsainay ianareo amin'izany. Saingy amin'ity tranga manokana ity kosa, ny tompon'antoka dia ireo fahabangan'ny lalàna sy ny tsy fisiana fifandrindràna ao anaty Lalàna mikasika ny Fanohanana ny Famokarana Mozika eto an-toerana, ary ny haratsin'ny fomba fampiharana azy.
Ho fanampiana azy mba hamokatra hira roa , novatsiana 9.000 euros ny mpikambana tranainy iray hafa tao amin'ilay kaomity, Simeon Ivanov-Kango. Raha vao nalefa tao amin'ny YouTube ny iray tamin'ireo hirany, nitranga ny tabatabam-bahoaka, nitanisa ny haratsian'ny kalitaon'ilay lahatsary, hatramin'ny hery ananan'ilay tetikasan'ny governemanta mamporisika ny fanivanan-tena eny amin'ny ankamaroan'ireo mpanakanto sy ireo olomalaza hafa.
Mpanao mozika efa nahazoazo taona i Kango, tsy dia nahita fahombiazana ara-bola loatra, na tao an-toerna na tany ivelany, saingy efa tamin'ny taona 1980 izy no nanomboka nanao mozika, naka tàhaka ny hiran'i Jimi Hendrix ary nisora-tena ho “mpaminanin'ny rock “. Nifaninana izy ary nahazo tao anatin'ny sokajy “kintana”.
Iray andro monja, ny lahatsarin'i Kango tao anaty YouTube, nitondra ny lohateny hoe “Amanet”  (teny tranainy be midika hoe “Lova” na “Didy miafina”), dia efa nahitana “tsy tia” maherin'ny 1.000, avy amin'ireo mpampiasa aterineto. Tao anatin'ny roa herinandro, nitombo ho 4.000 ny isan'ny “tsy tia”, miaraka amina “tia” zato fotsiny.
Tsy miady rima ny hira Amanet, ary ireo tonony, raha tsorina dia mifototra tanteraka amin'ny lisitr'ireo teny fanalahidy heverina ho “fitiavan-tanindrazana” izay matetika hita ao anatin'ny fampielezankevitry ny governemanta. Efa hatry ny ela no mpanohana ny antoko eo amin'ny fitondrana ilay mpanoratra sady mpiaka-tsehatra. Mikasika ny finoany ireo hevitra filôzôfika samihafa natambatra ho bolongana iray ny hirany : zava-miafina sy fitiavan-tanindrazana Balkan, nafangaro tamin'ny fanompoan-tsampy sy fivavahana kristianina, miaraka amin'ireo fanambaràna momba mahazava-dehibe an'i Makedonia ao anatin'ny tantaran'ny zanak'olombelona.
Hiaro an'izao tontolo izao ny Lion'i Makedonia
Sahala amin'i Alexander Ilay Mahery, Handresy ny ratsy izy…
Naneho ny tsy hafaliany tety anaty tambajotra sosialy  ireo olom-pirenena Makedoniana. Tao amin'ny ivontoeran'ny tetikasa Skopje 2014  no noraketina ilay lahatsary, izay nametraka ny taotrano “baroque” sy “néoclassique” tao afovoan-tanànan'i Skopje, manaraka ny fanirian'ny praiminisitra teo aloha mba hanome endrika “Eoropeana kokoa” ny tanàna. Raha niresaka an'io, nanoratra ny mpampiasa Twitter, Ann Bannann fa:
Nampiditra karazana mozika vaovao : ba-rock i
Lahatsoratra manesoeso  iray teo amin'ny Mojo.mk nitanisa ireo karazana kalitaon'ny hira voafantina, miainga avy amin'ny fanatsaràna ny fahatokisan-tenan'ireo
tanora mpihira (“Tsy afaka ny hanao zavatra tena ratsy ianao”) ka hatramin'ny
fandokandokafana ireo karazana tombontsoa ara-pahasalamana
(toy ny fampiasana hira ho vahaolan'ny fitohanana).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/02/82543/
 Public Broadcasting Service MRTV: http://mrt.com.mk/node/27398
 nanoratra bilaogy: http://nemolci.blogspot.mk/2016/01/blog-post.html
 Ho fanampiana azy mba hamokatra hira roa: http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=62FACA6571351340BD0D7888DF7CC778
 tambajotra sosialy: https://twitter.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%20&src=typd
 May 1, 2016: https://twitter.com/Ann_Bannann/status/726768763773816832
 Lahatsoratra manesoeso: http://mojo.mk/article/7-psihofizichki-benefiti-od-novata-pesna-na-kango